Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » सांसदको मात्रै दसैं भत्ता काट्ने विषय मान्य हुँदैन : लालबाबु पण्डित
काठमाडौं, कार्तिक ३ । पूर्वमन्त्री एवं सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद लालबाबु पण्डितले सांसदहरुको मात्रै चाडपर्व (दशैं) भत्ता कटौती गर्नु राम्रो नहुने बताएका छन् ।
अन्यथा, सांसदको मात्रै दसैं भत्ता काट्ने विषय आफूलाई मान्य नहुने उनले बताएका छन् । ‘सरकारी सेवा सुविधा लिने जति छन्, सबैले पाउने, निजी उद्योगधन्दाले दसैं भत्ता दिने, जनप्रतिनिधिलाई किन नदिने ?’ पूर्वमन्त्री पण्डितको प्रश्न छ, ‘जनप्रतिनिधि अ पराधी हुने, अरु निरपराधी हुने ?’
तर, पत्रकारहरुले सबैलाई एकै डालोमा हालेर आफ्नो मिडियामा, पत्रिकामा जनप्रतिधिहरुलाई ब दनाम गर्ने गरी जुन अभियान चलाइएको छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यही पत्रिकाले हो ६ वटा गाडी लिएर हिँड्छ लालबाबु पण्डित भनेर लेख्ने । लालबाबु पण्डितसँग गाडी छ ? लालबाबु पण्डितसँग घर छ ? म मोटरसाइकलमा हिँडिरहेको छु ।
त्यसकारण मलाई लाग्छ, जनप्रतिनिधिलाई बदनाम गरेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र सुदृढ हुँदैन । अ पराध गरेको छ भने अ पराधलाई द ण्डित गर्नुपर्छ । तर, यहाँ व्यवस्थाविरुद्ध नै जाने गरी जुन अभियान चलाउन खोजिएको छ, जनप्रतिनिधिलाई ब दनाम गरेर त्यो ठीक भइरहेको छैन् ।
छन् । सरकारी सुविधा लिने धेरै छन् । पत्रकारले दसैं भत्ता पाउँछ कि पाउँदैन ? पत्रकारलाई दिने, सरकारी सेवासुविधा लिने जति छन्, सबैले पाउने, निजी उद्योग धन्दाले पनि दसैं भत्ता दिने, जनप्रतिनिधिलाई किन नदिने ? जनप्रतिनिधि अ पराधी हुने, अरु निरपराधी हुने ?
सांसद राष्ट्रसेवक हुन् । कर्मचारी पनि राष्ट्रसेवक हुन् । कर्मचारीले सरकारको निर्णय र ऐन कानुन मान्नुपर्छ । सांसदले संविधान र ऐन कानुनलाई मान्नुपर्छ । त्यसकारण विपरीत केही कुरा भएको छ भने, अ पराधपूर्ण कुरा भएको छ भने त्यसलाई लिएर दण्डित गर्नुपर्छ ।
तर, जनप्रतिनिधिहरुले ऐन कानुनले दिएको सेवा सुविधा लिन हुँदैन भन्ने हो भने त सरकारी तहमा रहेकाहरुले पनि लिन सेवा सुविधा लिन हुँदैन । किनभने, त्यही ऐन मान्ने हो । सरकारको निर्णय नै मान्ने हो नि ।
यो विषय ऐन संशोधन गर्नेबेलामा गर्ने छलफल हो । अहिले त्यो ऐनमाथि छलफल नभएकाले गर्दा पछि हुने, वा त्यतिखेर हुने कुरा अहिले भन्न मिलेन । – यो खबर अनलाइनखबरबाट साभार गरिएको हो ।